मासिक १६ हजार कमाइ छ ? अब हुनेछ आफ्नै घर
तपाईंको मासिक १६ हजार ३२ रुपैयाँ कमाइ छ र आफ्नै घर होस् भन्ने चाहना छ भने अब पूरा हुन सक्छ । यो आम्दानी तलब वा व्यवसाय जुनसुकै माध्यमबाट आउने भए पनि हुन्छ ।
एभरेस्ट बैंकले ल्याएको नयाँ योजनाले यो सम्भव हुने देखिएको हो । बैंकले २५ वर्षसम्म किस्ता तिर्दा हुने गरी नयाँ र आकर्षक घर कर्जा योजना ल्याएको छ । यो योजनामा मासिक कम्तीमा १६ हजार ३२ रुपैयाँ आम्दानी हुने व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने बैंकले जानकारी दियो ।
योजनामा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा दिने बैंकको रिटेल सेल प्रमुख कल्पना पाण्डेले जानकारी दिइन् । यस्तो कर्जा घडेर भएका व्यक्तिले घर बनाउन वा नयाँ घर किन्नलाई पनि लिन सक्नेछन् ।
कस्तो आम्दानी हुनेले पाउँछन् ?
यो कर्जा योजनामा सवै प्रकारका वैध आम्दानी हुनेहरु सहभागी हुन सक्ने पाण्डेको भनाइ छ । बैंकले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने योजना बनाएको छ । २५ वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ ऋण लिने व्यक्तिले मासिक ९ हजार ५९९ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्नेछ भने उसको मासिक कमाइ कम्तीमा १६ हजार ३२ रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ताको १.६ गुणा आय हुने व्यक्तिलाई बैंकले ऋण दिनेछ । मासिक ९ हजार ५९९ रुपैयाँ किस्ता तिर्न मासिक कमाइ १६ हजार ३२ रुपैयाँ चाहिने हो ।
जागिरे, आफ्नै व्यवसाय गरेका वा भाडाबाट पनि आम्दानी गर्नेहरु यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कति ऋण लिँदा कति तिर्नुपर्छ किस्ता ?
बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिनेले मासिक ९ हजार ५९९ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, २० लाख रुपैयाँ ऋण लिनेले मासिक किस्ता १९ हजार ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । बैंकबाट ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिनेले मासिक किस्ता ३८ हजार ३९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यो किस्ता २५ वर्षका लागि हो ।
के के छन् सर्त ?
बैंकले घर बनाउन वा नयाँ घर किन्न यो योजनाअनुसारको कर्जा दिनेछ । यसका लागि बैंकले घर बनाउन लाग्ने खर्चको ७५ प्रतिशत ऋण दिनेछ भने जग्गाको बजार मूल्यको ६० प्रतिशत ऋण दिनेछ । बैंकले मध्यम आयस्तर भएकालाई लक्षित गर्दै यस्तो योजना ल्याएको हो ।
कति पर्छ ब्याज ?
यो योजनाका लागि अहिले बैंकले १०.७२ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । प्रत्येक त्रयमासमा हुने बैंकको आधार दर (बेस रेट) को फेरबदलका आधारमा ब्याजदर पनि परिवर्तन हुनेछ ।
यो कर्जा नयाँ घर बनाउन, किन्न र मर्मत सम्भारका लागि पनि हो । यस्तो ऋण लिन जग्गाको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, चारकिल्लाको सिफारिस, ब्लुप्रिन्ट ट्रेस, जग्गाधनी र आम्दानी भएको व्यक्ति भिन्दाभिन्दै भएमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र र आम्दानी प्रमाणित गर्ने कागजात (जागिरेको हकमा बैंकको तलब आएको देखिने बैंक स्टेटमेन्ट र आफ्नै व्यवसाय हुनेको हकमा व्यवसायको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) चाहिने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
कस्तो जागिर हुनेले पाउँछन् ?
बैंकले दिएको जानकारीअनुसार निजी, सरकारी जस्तोसुकै क्षेत्रका जागिरले पनि यो योजनाअनुसार ऋण पाउनेछन् । तर, यस्ता कर्मचारी स्थायी जागिरे हुनुपर्ने सर्त बैंकको छ ।
सेवा शुल्कमा छुट
बैंकले यो योजनाअनुसार कर्जा दिन उसले लिने सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । बैंकहरुले ऋण दिँदा सामान्यतः १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन् । यो योजनाको ऋणका लागि भने ०.७५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लाग्नेछ ।
कतिन्जेलमा हुन्छ ऋण स्वीकृत ?
बैंकले ‘घर भाडाभन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन, आफ्नै घरको किस्ता बुझाऊँ’ भन्ने नारासहित यो योजना ल्याएको हो । ब्याजदर सस्तो बनाएको र सेवा शुल्क कम गरेको दाबी गरेको बैंकले ऋण प्रवाह पनि छिटो गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनाअन्तर्गतको ऋण एक सातादेखि १० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्ने योजना बनाइएको बैंकको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, ०४:००:००
माछापुच्छ्रे बैंकले थप्याे ९ शाखारहित बैंकिङ सेवा